Abendabuko baxegiselwe oweCovid-19 - Ilanga News
Home Izindaba Abendabuko baxegiselwe oweCovid-19
Bathi akhona amakhambi asizayo emkhuhlaneni
Abelaphi bendabuko bayayincoma impepho ekulweni nezifo
ITHEMBA kubelaphi bendabuko njengoba enye yezinhlangano ebamele ithi ngemuva kokuhlangana no-Ngqongqoshe wezeMpilo uDkt Zweli Mkhize emasontweni amabili edlule, uvumile ukuthi bekungamele bashiywe ngaphandle njengabantu abenza imisebenzi ebalulekile.
Lokhu kuvezwe nguNkz Phephisile Maseko onguMxhumanisi ku-Zwelonke weTraditional Healers Organisation of South Africa, othe ngokubambisana nezinye izinhlangano bahlangane noDkt Mkhize, obalalelile wabe esexolisela nomengameli wezwe ukuthi angaxhumani nabo ngesikhathi ehlangana nabaholi bezinhlangano ezahlukene.
Uthi kubona kufane nokubukelwa phansi kwemithi yesintu ukushiywa kwabo ngaphandle ekubeni amakhemisi emithi yasentshonala-nga wona avunyelwe ukuqhubeka nokusebenza.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngemuva kokuvalwa kwezwe, abelaphi be-ndabuko abaningi bakhononde ngokuvalelwa ngaphandle wuhulumeni nangokubukelwa phansi kwale ndlela yokwelapha. Kuze kwaba nomkhankaso nasezinkundleni zokuxhumana lapho abelaphi bendabuko ebebebuza khona ukuthi uma abantu abagulayo befika ezigodlweni zabo, kuzomele benze njani.
UMnu Solly Nduku onguNobhala weNational Unitary Professional Association for African Traditional Health Practitioners of SA (NUPA-SA), uthe uDkt Mkhize uvumelane nabo wathi umthetho abasebenza ngaphansi kwawo njengabelaphi bendabuko uyabavumela (abelaphi bendabuko) ukuba babe ngabasebenzi ababalulekile.
“Okubalulekile wukuba nathi silandele yonke imibandela yezempilo ebekiwe, okuhamba phambili kuyona inhlanzeko nokuvikela izi-guli ngokunjalo,” esho.
Uthi yize ingekho imithetho ephoqa abelaphi bendabuko ukuba babe ngaphansi kwezinhlangano ezithile kodwa bayakuncoma ukuthi iziguli zizibhekisise izindawo ezizihambelayo ziyofuna kuzona usizo ngalesi sikhathi ngoba labo abazimele, abangekho ngaphansi kwezinhlangano kakukho lapho be-ngababika khona uma bengalandeli imiyalelo efanele.
Unxuse abelaphi ukusebenzisa amakhambi anjengoMnwele, iLabatheka, Impepho, isibhaha, Ikhathazo, Indawuluthi namanye amakhambi esintu alwa nemikhuhlane.
UDkt Velaphi Mkhize, waseMlambomunye, eMgungundlovu, ungomunye wabelaphi bendabuko abakhulumele phezulu ngemuva kokuvalwa kwezwe, ekhala ngokushiywa kwabo ngaphandle. Ekhuluma ne-LANGA, uthe zimjabulise kakhulu izindaba zokuthi uDkt Mkhize uyayizwa into abebekhala ngayo futhi naye uyavumela nabo.
“Kubalulekile nokuthi izigodlo zethu zihlanzeke, abantu babe namanzi ahlanzekile okuwasha izandla, bangahlali basondelane okuyinto ebesivele siyenza eMlambomunye,” esho.
UMnu Nduku uthe bazophinde babe nomunye umhlangano noDkt Mkhize ukuze babonisane ukuthi yikuphi okungenziwa wuhulumeni ukwelekelela abelaphi bendabuko ngezinsiza, ikakhulukazi zokugcina iziguli zivikelekile.
Uthe laba abadayisa imithi ezimakethe bese bevele bevumelekile ukuthi bangasebenza ngemuva kokuvunyelwa kwabadayisi basemigwaqweni.
Previous articleUmndeni usola amaphoyisa ngokugwazelwa
Next articleI-Chiefs nePirates kowokulwa neCovid19